Madax ka tirsan dowladda oo xalay lug ku maray inta u dhaxeysa hoteellada Ramadaan & Lafweyn – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madax ka tirsan dowladda oo xalay lug ku maray inta u dhaxeysa hoteellada Ramadaan & Lafweyn
Muqdisho – Mareeg.com: Munaasabad ballaaran oo loogu magac daray “Bandhigga dadweynaha iyo amniga Caasimadda” ayaa xalay lagu qabtay xarunta cusub ee maamulka gobolka Banaadir uu ka furtay degmada Heliwaa ee kazoo horjeeda hoteelka Ramadaan.
Munaasabadan ayaa waxaa ka qeyb galayn wasiirka aminga qarana C/kariim xuseen Guuleed, xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), taliyaha milateriga Soomaaliya Jen. Indhaqarshe, qaar ka mid ah gudoomiyaasha gobolka Banaadir, oday dhaqameedyo, ururka haweenka qaranka fanaaniin iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo hadal ka jeediyay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsanyahay in xilli habeen ah munaasbad sidaan u weyn lagu qabto xaruunta cusub ee uu ka hirgeliyay dagmada Heliwaa ee gobolka Banaadir.
Sidoo kale gudoomiyaha ayaa xusay in amaanka Muqdisho la isku haleeyn karo isagoo tilmamay in ay taasi sabab u tahay ciidamada amaanka iyo shacabka oo si wada jir ah isaga kaashaday mabadgelyada iyo ciidamada oo muujiyay feejignaan dheeraad ah kana hortaga falalka liddiga ku ah ammaanka.
Jen. Muungaab ayaa wasiirka aminga, taliyaha milateriga iyo wasiirrada kale ugu baaqay iney degaan xaafadaha Cali Turcaaye oo Suuqa Xoolaha ka tirsan, Ciise Cabdi oo ka tirsan Deyniile iyo Cali Kamiin iyo xaafado la mid ah.
“Waad arkeysaan caawa waxaa lagu baashaalayaa degmada Hiliwaa, amaanku waa sudagn yahay, waxaana rajeynayaa inaan arko wasiiro subaxdii kazoo shaqo tegaya meelo iga xageeya” ayuu yiri Muungaab.
“Taliyaha milateriga Jen. Indhaqarshe, wasiirka aminga iyo xubnaha kale ee dowladda waxaan leehay madaxweynaha haku ciriirina madaxtooyada ee dega Cali Tyrcaaye, Ciise Cabdi, Furayaasha iyo Cali Kamiin” ayuu sidoo kale yiri Munngaab.
Wasiirka amniga Qaran C/kariin Xuseen Guleed oo gabagabadii musaabadda hadal ka jeediyay ayaa mahadcelin ujeediyay mamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyayaasha degmooyinka sida ay u wadaan howlaha loo igmaday, isagoo dhinaca kale sheegay in gobolka banaadir uu yahay nabadislamarkaana uu ugudbay hormarinta adeegyada bulshada.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xubnihii ka qeybagalay socodkii xalay ayaa sheegay in Alshabaab laga adkaaday, maadaama sida uu yiri xilli iyo habeen ah isaga iyo xildhibaan kale gaar ku tageen degmada Hiliwaa iyo Yaakhshiid.
“Waan ka adkaanay Alshabaab, dhulku waa nabad, aniga iyo xildhibaan ayaa halkaan ku nimid gaarigigeyga, xildhibaandii hore markii ay jireen anigu waxaan ku dhaawacmay gudaha madaxtooyada, waxaa igu dhacday xabad Alshabaab soo rideen” ayuu yiri xildhibaan Jeesow.
Markii ay soo idlaatay munaasabaadda ayaa mas’uuliyiintii iyo dadweeynihii ka qeybgalay waxa ay socod dheer kusoo mareen laga soo bilaabo hotel Ramadaan, hotel Kaah, isgoyska Fagax, iyo Hotelka Lafweyn.
Gudoomiye Muungaab ayaa wasiirka aminga iyo xubaha kale ee dowladda warbixin ku siiyey Isgoyska Fagax, wuxuuna sheegay in suuqa balka laga rararyo halkaas, islamarkaana loo celinayo Suuqii balka Juungal oo dadkii deganaa laga raray.
Wuxuu sidoo kale Muugaab sheegay in maamulka dayactir ku sameeyey meelo laamigu bohol ka noqday oo u dhaxeeya Isgoyska Fagax iyo hotel Kaah.
Waa markii ugu horreysay ee wasiiro iyo mas’uuliyiin kale xiili habeen halkaas tagaan tan iyo markii maamulka gobolka ee Muungaab hogaamiyo uu xafiis lagu shaqeeyo ka furtay degmada Hiliwaa.
Masuul ka tirsan maamulka degmada Wadajir oo lagu dilay qarax gaari